Al-shabaab oo kordhiyay weerarada ay ku hayaan injineerada turkida ah ee ku howlan dhismaha wadada muqdisho iyo afgooye - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Al-shabaab oo kordhiyay weerarada ay ku hayaan injineerada turkida ah ee ku howlan dhismaha wadada muqdisho iyo afgooye
September 27, 2019 Duceysane1108
Al-Shabaab ayaa kordhisay beegsiga ay ku heyso Injineerada gacanta ku heysa dhismaha wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, iyagoo dhowr weerar oo qaraxyo ah u dhigay howlwadeenadan oo intooda badan khasaare dhaawcayo ah lagu gaarsiiyay.
Weerarkii u dambeeyay waxa uu duhurnimadii shalay ka dhacay Isgoyska Zoobe ee bartmaha magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi lagu qarxiyay gaari nooca aan xabada Karin oo ay saarnaayeen Injineero macalimiin ah, waxaana halkaasi ka dhashay dhawacyada Saddex qof oo mid Haweeney tahay.
Xubnaha la beegsaday ee Turkida ah waxey ka howlgalaan iskuulada ay gacanta ku hayso Hay’adda Maarif oo sanadkii 2016 ka shaqo bilowday Magaalada Muqdisho, iyagoo u kuur galayay sida ay howsha wadada ku socoto.
18-kii bishan, Injineer Turki ah oo saarnaa gaari HILUX ah ayaa lagu qarxiyay inta u dhaxeysa Jaamacada Shabelle iyo Weydoow, waxaana halkaasi ka dhashay dhaawaca Injineerka Turkiga ah iyo laba ka mid ah ilaaladiisa.
12-kii May, nawaaxiga isgoyska Taleex waxaa qarax lagula beegsaday Injineer Turki ah, iyadoo dhaawac daran oo qaraxaasi ka soo gaaray uu markii danbe ugu geeriyooday gudaha Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho.
Khuburada dhinaca amaanka ayaa beegsiga Shabaab ee Injineerada Turkida ku sababeeyay walaaca ay Kooxdan ka qabto culeyska dhinaca dowladda uga imaan kara hadii Laami la saaro wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.
Wadadan oo bur bur xooggan uu ka jiro ayaa miinooyin dhulka lagu aaso waxaa lala beegsadaa gaadiidka Ciidamada iyo xubnaha ka tirsan dowladda, iyagoo mararka qaarna weeraro toos ah u dhiga Ciidanka AMISOM oo wadadan marin muhiima u yahay.
25-kii bishan oo Arbacadii ku aadaneyn, Shabaab ayaa qarax culus la eegtay kolonyo uu la socday Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute, iyadoo qaraxaasi uu ka dhacay meel ku dhow halka ay haatan ku egtahay dhismaha wadada, inkastoo ay sii soconeyso.
Duqa muqdisho oo la kulmay safiirka maraykanka ee soomaaliya
Sawirro: Dacwadii dilka Marxuum Cabaas Siraaji oo lasoo gabagabeeyey